Stress – Healthy Life Journal
သင် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေကြောင်း ပြသနေသည့် လက္ခဏာငါးမျိုး
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— လူအများစုဟာ အလုပ်များတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို အနည်းနဲ့အများဆိုသလို နေ့စဉ်ခံစားနေရပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားနေရချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေမယ့်နည်းတွေကို လိုက်နာပြီး သက်သာရာရအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရချိန်ကြာသွားရင် စိတ်ဝေဒနာအဖြစ် ပြောင်းသွားနိုင်လို့ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေကြောင်း ပြသတဲ့ အောက်ပါလက္ခဏာငါးမျိုးကို...
စိတ်ဖိစီးမှုက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အကြောင်းပြချက်သုံးရပ်
———၊ လရိပ်မေ ၊——— လူတိုင်း စိတ်ဖိစီးမှု အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ရှိတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကို ရေရှည်ခံစားရတဲ့အခါ နာတာရှည် ကျန်းမာရေးပြဿနာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုက ကျန်းမာရေးကို အောက်ပါအကြောင်းပြချက်သုံးရပ်နဲ့ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ (၁) မျိုးအောင်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းခြင်း နာတာရှည် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကို...
ရလဒ်ပြောင်းပြန်ထွက်နိုင်သည့် စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျရေး နည်းလမ်းများ
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— လေ့လာမှုတွေအရ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့နေ့တွေမှာ ပြန်လည်သက်သာရာရစေဖို့ လူအများလုပ်လေ့ရှိတဲ့ နည်းတွေက စိတ်ဖိစီးမှုကို ပိုတိုးစေကာ ရလဒ်မှားတွေကိုပဲ ရစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသုံးများခြင်း လုပ်ငန်းခွင်ပရော့ဂျက် လုပ်ဆောင်တာ ဒါမှမဟုတ် အိမ်အလုပ်လုပ်တာတို့ကို ခဏရပ်ပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လို လူမှုကွန်ရက်ကို...
စိတ်ဓာတ်ကျနေသူကို အားပေးစကားပြောတဲ့အခါ . . .
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ သင့်ချစ်သူ ဒါမှမဟုတ် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို အားပေးတဲ့အခါမှာ မပြောသင့်တဲ့၊ သူစိတ်ဓာတ်ပိုကျသွားစေမယ့် စကားတွေကို ရှောင်တတ်အောင် အထူးသတိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဓာတ်ကျနေသူ အားရှိလာအောင် ပြောသင့်တဲ့ စကားတွေကိုလည်း သိထားရပါမယ်။ မပြောသင့်သော စကား-...
နေ့စဉ် စိတ်ဖိစီးမှုများစေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကနေ ရုန်းထွက်ရအောင်
———၊ ငွေစင်ကြယ်ယံ ၊——— စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ ဘဝရဲ့ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ပါ။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ ကြုံလာရတိုင်း အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အကြံပြုချက်တွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ လူထူထပ်လို့ စိတ်ဖိစီးမှုများနေသလား ဥပမာပြောရရင် လူထူထပ်တာက သင့်ကို...
စိတ်ဖိစီးမှုက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုထိခိုက်စေသလဲ ….
…………….၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊……………. ဦးနှောက်နှင့် နာ့ဗ်ကြော စိတ်ဖိစီးမှုများရင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ စိတ်ကယောက်ကယက်ဖြစ်ခြင်း၊ အစာကို အလွန်အကျွံစားခြင်းနဲ့ အနည်းငယ်သာ စားခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာ၊ အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခဲခြင်းနဲ့ ကြောက်ရွံ့ပူပန်ပြီး...
လူအများမျှော်လင့်မထားဘဲ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည့် အရာများနှင့် ဖြေလျှော့နည်းများ
————–၊ ဇွန် ၊————— စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့ ဆိုလိုက်ရင် လူအများစုက အလုပ်အကိုင်၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ မိသားစု၊ ကျန်းမာရေး စတာတွေကိုပဲ ပြေးမြင်တတ်ကြတယ်။ တကယ်လည်း အဲဒီအရာတွေက စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပုန်းလျိုးကွယ်လျိုးနဲ့ ကိုယ်ထင်မှတ်မထားဘဲ စိတ်ဖိစီးမှုပေးနေတဲ့ အရာတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။...
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) စာရေးသူရဲ့မိတ်ဆွေ ကိုတာက သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဂိုးကို့စ်ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့တော်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားတာ မကြာသေးဘူး။ သူ့အိမ်ကို အလည်လာပါဦးဆိုလို့ တစ်နေ့မှာ စာရေးသူရောက်ရှိသွားပါတယ်။ “ခင်ဗျားအိမ်ကိုရှာရတာ မလွယ်ပါလားကိုတာ” “ဂျီပီအက်စ်မသုံးဘူးလား” “သုံးတာပါပဲ။ တစ်နေရာမှာ အကွေ့မှားသွားလို့ တစ်ပတ်လည်သွားတယ်။...